मोदी सरकार कलमसँग कसरी डराउँछ ? यो अन्तरवार्ता पढ्नुहोस् — OnlineDabali
मोदी सरकार कलमसँग कसरी डराउँछ ? यो अन्तरवार्ता पढ्नुहोस्
Posted on March 12, 2017 by अनलाइन डबली
(यही मार्च ७ तारिखका दिन दिल्ली विश्वविद्यालयअन्तर्गत रामलाल आनन्द कलेजका अङ्ग्रेजी विषयका प्राध्यापक जि.एन. साइबाबासहित ५ जनालाई महाराष्ट्रको अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएपछि यसका विरुद्ध विश्वव्यापी आक्रोस उत्पन्न भएको छ । फैसलालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी, पूर्वाग्रहयुक्त र फरक मत राख्नेहरू त्यसमा पनि बौद्धिक क्षेत्रलाई आतङ्कित पार्न गरिएको फैसला भनेर बौद्धिक क्षेत्रबाट तीव्र निन्दा गरिएको छ । यहाँ सो फैसलाका सम्बन्धमा साइबाबाकी जीवनसाथी वसन्था कुमारीसँग ज्योती पुनवानीले गरेको कुराकानी ।)
के तपाईँले यस किसिमको फैसलाको अपेक्षा गर्नुभएको थियो ?
एकदमै थिएन । म त तीनछक परेँ । हामीहरू बहसलाई नजिकैबाट अध्ययन गरिरहेका थियौँ । कमजोर स्वास्थ्यका अतिरिक्त पनि साइबाबा बहसमा उपस्थित हुनुभएको थियो । उहाँका विरुद्ध अभियोग लगाउने आधार नै छैन । सरकारी अभियोजकसित कुनै ठोस प्रमाण नै थिएन । उनीहरूले घरबाट जे कब्जा गरेर लगेका थिए—कम्प्युटरको हार्डडिस्क, सिडीहरू, साहित्यिक सामग्रीहरू सबै झोलामा हालेर खुला रूपमा लगेका थिए, जब कि नियमअनुसार ती सबै सिल गरेर लानुपर्थ्यो । उनीहरूले साइबाबाको सही भएको चिठी भनेर अरू कसैको हस्ताक्षर भएको चिठी अदालतमा पेश गरेका थिए । यसले कसरी प्रमाणको काम गर्छ ? सरकारी अभियोजकसित स्वतन्त्र रूपमा एक जना मात्र साक्षी थिए, अरू साक्षी भनिएका त प्रहरी जवान र अधिकृतहरू मात्र थिए । त्यो स्वतन्त्र भनिएको मान्छे पनि पुलिसको दबाबमा साक्षी बसेको भनेर प्रमाणित भइसकेको छ ।
अरू आधारहरूका आधारमा उहाँ निर्दोष साबित हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । यस्तै खालको मुद्दा, जसमा मान्छेलाई माओवादी पार्टीको सदस्य भएको अभियोग लगाइएको थियो, सुप्रिम कोर्टले वैचारिक स्वतन्त्रताको प्रश्न भन्दै अभियोगलाई खारेज गरेको थियो । यी सबै कुराहरू हाम्रो वकिलले नजिरका रूपमा पेश गरेका थिए । तर फैसलामा उनका सबै तर्कहरूलाई बेवास्ता गरियो ।
वर्ष दिनदेखि गरिएको बहसको प्रतिबिम्बन फैसलामा अलिकति पनि परेको देखिएन । उल्टै राजनीतिसित जोडेर हामीलाई दोषी साबित गर्ने प्रयास गरियो । वास्तवमा उनीहरूले फैसलाको दिन अदालतभित्र र बाहिर जसरी सुरक्षाको बन्दोबस्त गरेका थिए, यसले फैसलाको प्रकृतिलाई सङ्केत गरिरहेको थियो । साइबाबाले २ वर्ष जति जेलमा बिताइसक्नु भएको थिए, हामी उहाँको जीवनप्रति चिन्तित थियौँ ।
विश्वविद्यालयको कम्पाउन्ड वरिपरि गुन्डाहरू खुलेआम घुमिरहेका छन्, महिलामाथि हातपात गरिरहेका छन्, मनपरी गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई केही सक्दैन मोदी सरकार । तर सर्वसाधारण नागरिकको पक्षमा बोल्नेहरूका लागि राज्य एकदमै असहिँष्णु बनेको छ ।
अहिले कस्तो छ उहाँको स्वास्थ्य ?
नाजुक । वास्तवमा उहाँ फेव्रवरी २८ मा अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको थियो र डाक्टरले १० दिनको बेडरेस्टको सल्लाह दिएको थियो, हिँडडुल नगर्न र यात्रा नगर्न पनि भनेको थियो । छातीको दुखाइ र सास फेर्न गारो भएका कारण उहाँलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको थियो र आइसियुमा राखिएको थियो । जेलको खानपिन र अन्य कारणले उहाँको आमासयमा पत्थरीको समस्या भएको कुरा डाक्टरले बताएका थिए । आमासयमा रहेको पत्थरीको छिटै अप्रेसन नगरे यसले प्यानक्रियाजमा समेत असर पर्न सक्छ भनेर डाक्टरले भनेका थिए । हामीले यी सबै विवरण अदालतमा पेश गर्यौं । यति पनि उनीहरूले फैसलाको अवधिभपरि २ घण्टाका लागि मात्रै भए पनि अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने भनेर जिरह गरे ।
वास्तवमा पहिलो पल्ट जमानतमा छुटेको समयदेखि नै उहाँको स्वास्थ्य एकदमै कमजोर हुँदैगएको थियो । पहिलेपहिले उहाँ ह्विलचेयरमा यताउति गर्न सक्नुहुन्थ्यो, अहिले त त्यो पनि छैन । पहिलोपल्ट जेलमा बस्ता उहाँको बायाँ हातको मांशपेसी र नशा काम नलाग्ने भयो र अब उहाँ आफैँले ह्विलचेयर पनि गुडाउन सक्नुहुन्न । जेलबाट छुटेपछि पनि उहाँले धेरजसो समय दिल्ली र हैदरावादका अस्पतालहरूका फिजियोथेरापी सेन्टरमै बिताउनुभयो । उहाँलाई सास फेर्न गारो हुन्छ, मुटुमा समस्या छ र फोक्सोमा इन्फेक्सन छ ।
यति हुँदाहुँदे पनि अदालतले जेलअधिकारीहरूलाई यथाशीघ्र स्वास्थ्योपचार प्रदान गर्न र औषधी-उपचारको व्यवस्थ गर्न निर्देशन दिने कुरालाई इन्कार गर्यो । अदालतले हाम्रो वकिललाई औषधीउपचारसम्बन्धी निवेदन जेल अधिकारीलाई दिन भन्यो । दोस्रो पल्ट जेल पठाउँदा पनि जेल अधिकारीले यस किसिमको निवेदन लिन इन्कार गरेको थियो । त्यतिबेर पनि हामीले ओषधीउपचारका लागि उच्च न्यायालयबाट विशेष आदेश गराउनुपरेको थियो ।
आदिवासीले ओठ चलाउँदा मात्र पनि गोली खानुपर्छ । तपाईँ महिला हुनुहुन्छ भने यौन हिँसाको सिकार बन्नुहुन्छ, तपाईँमाथि बलात्कार हुन्छ, तपाईँका दाजुभाइलाई झुठा मुद्दामा फसाइन्छ र पूरा गाउँ आगोमा सखाप पारिन्छ । तर बोलेकै भरमा साइबाबामाथि गोली ठोक्न सक्ने स्थिति नभएकाले ५ वर्षदेखि उनीहरू साइबाबालाई यातना दिइरहेका छन् ।
पचास प्रतिशत तलबले (मुद्दाका कारण निलम्बन परेको बेला ५० प्रतिशत मात्र तलब उपलब्ध हुन्थ्यो) मात्र तपाईँले कसरी धान्नुभयो त ?
मैले ७५ प्रतिशत तलब उपलब्ध गराउनका लागि धेरैपल्ट राम लाल आनन्द कलेज र विश्वविद्यालयमा निवेदन दिएँ, उहाँको तलबबाहेक हाम्रो आम्दानीको अर्को बाटो थिएन–सासु, छोरी र म थियौँ, तर अस्वीकार गरियो ।
किन यसरी निर्मम किसिमको सजाय दिइयो ? के जमानतमा छँदा उहाँले त्यस्तो केही गर्नुभएको थियो ?
उहाँले गर्न सक्ने कुरै थिएन । उहाँ एकदमै अशक्त हुनुहुन्थ्यो । के हो उहाँको अपराध ? मैले पनि केही बुझ्न सकेकी छैन । ९० प्रतिशत अशक्त मान्छेसित किन उनीहरू यस्तो औधी डराएका हुन् ? उहाँ चोबिसै घण्टा सबैका सामु हुनुहुन्छ, कलेजमा पढाइरहनुभएको छ । उहाँ भूमिगत त हुनुभएको छैन । उहाँले कसैलाई हानी-नोक्सानी पनि पुर्याउनुभएको छैन । तर पनि उनीहरूले उहाँलाई आजीवन कारावासको सजाय दिएका छन् ।
विश्वविद्यालयको कम्पाउन्ड वरिपरि गुन्डाहरू खुलेआम घुमिरहेका छन्, महिलामाथि हातपात गरिरहेका छन्, मनपरी गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई केही सक्दैन मोदी सरकार । तर सर्वसाधारण नागरिकको पक्षमा बोल्नेहरूका लागि राज्य एकदमै असहिँष्णु बनेको छ । अरूजसरी नै साइबाबाले पनि आदिवासीहरूमाथि राज्यद्वारा गरिएको दमनका विरद्ध बोल्नुभएको हो । यसो गर्नु उनीहरूका लागि असह्य हुन्छ । ‘युएपिए’ जस्तो कालो कानुनले समेत हाम्रो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकारको हरण गर्न सक्तैन—यो कुरा त सुप्रिम कोर्टले पनि भनेको छ । राज्यले नागरिकमाथि विचार लाद्न सक्तैन । यसलाई प्रजातन्त्रको चरित्र भन्ने गरिन्छ, तर अहिलेको प्रजातन्त्रका आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ हराइसकेको छ ।
आज बस्तरमा अति दमन छ । आदिवासीले ओठ चलाउँदा मात्र पनि गोली खानुपर्छ । तपाईँ महिला हुनुहुन्छ भने यौन हिँसाको सिकार बन्नुहुन्छ, तपाईँमाथि बलात्कार हुन्छ, तपाईँका दाजुभाइलाई झुठा मुद्दामा फसाइन्छ र पूरा गाउँ आगोमा सखाप पारिन्छ । तर बोलेकै भरमा साइबाबामाथि गोली ठोक्न सक्ने स्थिति नभएकाले ५ वर्षदेखि उनीहरू साइबाबालाई यातना दिइरहेका छन् । उनीहरूलाई उहाँको स्वास्थ्य एकदमै खराब अवस्थामा छ भन्ने कुरा थाहा छ, अब आएर उनीहरूले आजीवन जेलमा सडाउन खोजेका छन् । उहाँको शक्ति भनेको के हो र ? उहाँको शक्ति भनेको लेख्नु र बोल्नु मात्र हो । र यो आजीवन कारावासको सजायले उहाँको विचारअभिव्यक्तिलाई मेटाउन सक्तैन ।
हरेक मान्छे यस किसिमको फैसला विरुद्ध बोलिरहेको छ । उस्मानियाँ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरे । जामिया मिलाका विद्यार्थीहरूले जनसभाको आयोजना गर्दैछन् । उहाँ जमानतमा छोडिनुभएको बेला, हामी जहाँ जान्थ्यौँ, विद्यार्थीहरू हामी भएठाउँमा आउँथे र भन्थे- “सर ! हामी लज्जित छौँ, हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ, तपाईँ त लडिरहनुभएको छ, तपाईँ हाम्रालागि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ ।” यो फैसलापछि मभन्दा पनि विद्यार्थीहरू बढी दुखित छन् ।
उहाँको आमा र तपाईँको छोरीले यस फैसलालाई कसरी लिएका छन् ?
उहाँको आमा धेरै रुनुभयो । केटाकेटीदेखि नै आमालाई छोराको शारीरिक अवस्था थाहा छ, तर यस्तो भएर पनि जीवनको यति लामो समय पार गर्नसकेकोमा खुसी हुनुहुन्थ्यो । तर अब उसले दुख पाएको हेर्न सक्तिन भन्नुहुन्छ । मुटु फुटलाजस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ । मेरी छोरी १९ वर्षकी मात्र छे । तर यता ५ वर्षदेखि, कलिलै उमेरमा उसले धेरै कुरा भोगेकी छे ।
विचारका लागि तपाईँको श्रीमानले ठूलो मूल्य चुकाउनु भएको छ । यसरी विचार व्यक्त गर्नुभन्दा बरु केही नगरी चुपचाप बसेको भए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँहरूलाई कहिल्यै लागेन ?
अहँ, केटाकेटीदेखि नै स्कूलमा हामीले खास मान्यताका बारेमा पढेका थियौँ । भारतको संविधानअनुसार सबै मान्छे बराबर छन् भनेर पढेका थियौँ । सबैले संविधानको पालना गर्नुपर्छ भनिएको थियो हामीलाई । साइले गरेको पनि त्यही हो, उहाँले संविधानभन्दा बाहिर केही पनि गर्नुभएको छैन ।स्कुलमा पढेको कुरालाई नै उहाँले व्यवहारमा लागू गर्नुभएको हो ।
पहिलोपल्ट उनीहरूले पक्राउ गरेर लैजाँदा एयरपोर्टमा उनीहरूले भनेछन्- “यसमा सही गर्नुस्, हामी तपाईँलाई छोडिदिन्छौँ ।” त्यसमा के लेखिएको थियो, उहाँलाई थाहा थिएन, उहाँले सही गर्न मान्नु भएन । गत वर्ष, जेलमा उपचार गर्न अस्वीकार गरेपछि जमानतका लागि अपिल गर्दा त्यतिबेर पनि उनीहरूले सही गर्न दबाब दिएका थिए । उनीहरूले उहाँलाई भनेका थिए , “अहिले पनि ढिलो भएको छैन, सही मात्र गर्नुभयो भने तपाईँ छुट्न सक्नुहुन्छ ।” तर मूल्यमान्यता भन्ने चिज पनि केही हो । उहाँ साहित्य पढाउनुहुन्छ, त्यो साहित्यले केही मूल्यलाई बहन गर्छ । यही मूल्यले हामीलाई जीवित राख्छ । मूल्यलाई त्यागेपछिको जीवनको के सार्थकता र ? त्यसपछि हामी र लासबीच केही भिन्नता हुँदैन ।
अनु. डा. ऋषिराज बराल
सम्पूर्ण समय क्याम्पस र विद्यार्थीहरुको लागि दिनेछुः स्ववियु अध्यक्ष शाही
चुनावले एकीकृत जनक्रान्तिको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्‍यो
﻿﻿भीमदत्तका सिपाहीले भने-देशमा अब झन् शान्ति हुनेवाला छैन
चुनाव जित्ने, सरकारमा जाने र पैसा कमाउने नेपाली राजनीतिको मूल प्रवृत्ति- नारायणकाजी
दलाल-भ्रष्टाचारीको अादेश माने प्रहरीले फेरि दुःख पाउँनेछ-विप्लव (अन्तरवार्ता)